August 9, 2020 NEWS 2
MUQDISHO(P-TIMES) – Warsidaha PuntlandTimes wuxuu ogaaday in shirkii gaarka ahaa ee u dhaxeeyey guddiga Farsamada ee Turxan-bixinta Hanaanka loo heli karro doorasho laysku raacsan yahay oo dhacda sannadka 2021-ka, kana mid aha qodobadii ay ku heshiiyeen Hoggaamiyayasha siyaasadda ee kushiray Dhuusa-Mareeb uu ka furmay magaalada Muqdisho, iyadoo ay joogan dawlad gobaleedyada iyo dawladda Faderaalka, ayna maqan tahay oo kaliya Puntland.
Warsidaha ayaa ogaaday in xubnaha guddiga ee dawlad gobaleedyada kale oo dhan ay madasha kusugan yihiin, kulamaduna ay shalay ka bilowdeen Hotelka Decale ee kuyala gudaha garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho.
Sida ay sheegayan wararka lahelayaa ma cada ujeedada dhabta ah ee ka dambeysa in ay Puntland ka maqnaato shirkan muhiimka ah ee guddiga Farsamada, iyadoo horey u magacowda labo xubnood oo ay u dirsato ka qeybgalkooda.
Xukuumadda Faderaalka ayaa dhawaan u qabatay dawlad gobaleedyada xubnahooda in ay 5ta bisha August kusoo xaadiraan magaalada Muqdisho, si ay guddiyadu uga arrinsadaan nooca doorasho ee lafilayo in ay ka dhacdo gudaha Soomaaliya.
Doodaha guddiyada oo maanta bilaban doona ayaa noqonaya kuwa xasaasi ah, waxaana lafilaya in diiradda lagu saaro Tubta doorasho ay isku waafaqsan yihiin, waxana lasoo jeedinayaa in doodaha qaarkood ay ku jiran doorasho dad-ban oo ay dawlad gobaleedyada qaarkood riixayaan.
Maqnaanshaha Puntland oo aan ilaa hadda sabab cad loo heynin ayaa loo arkaa mid abuuri kara shaki kale oo ku gadaaman ujeedada maqnaanshahan, waxana wararku sheegayaan in uu jiray xariir lala sameeyey Madaxtooyada Puntland oo an hirgalin.
Puntland ayaan u hogaansamin go’aankii kasoo baxay Dhuusa-Mareeb, inkastoo Madaxweyne Deni magacabay wasiirkiisa Arrimaha gudaha & Agaasime kuxigeenka Madaxtooyadiisa, haddana xubnahaas ayaan wali helin sida ay xoguhu sheegayaan amarka ku wajahan in ay ka qeybnoqdan kulamada Muqdisho.
Warar madax banaan ayaa cadeynaya in ay Puntland ka carootay magacabidii Madaxweynaha Federaalka arrimaha doorashada & Siyaasadda u xilsaartay Cali Raage oo horey uga shaqeeyey doorashooyinkii 2016-kii, sidaas oo kalena in kulamada loo wareejiyo magaalada Muqdisho ayay u aragtay mid aan sax aheyn, sida ay sheegayaan warar laga helayo xubno katirsan Madaxtooyada Puntland.
asc webkaanoow nimanyahow beenta iska daaya meesha Jubaland ma joogto ,shirna meesha kama socdo sida aan horay shalay idiinku sheegay raga gudiga farsamada jubaland nayrobi kenya ayay jiraan markale wax shir farsamo la dhaho oo furmay ma jiro ee rabitaankiina umada soomaaliyeed ee webkiina akhrista ka daaya fadlan.